IPhone Zviteshi | IPhone nhau
IPhone Zviteshi Kune akawanda pamusika, kunyange hazvo ivo vemberi chete vanofarira kunakidzwa nekushandisa kunesimba kana zvinhu zvechizvino zvinoiswa muIOS, sisitimu yayo yekushandisa. Kubva 2007, zvizvarwa zvinoverengeka zveApple foni zvakabuda: PEDYO, 3G, 3GS, 4, 4S uye, yazvino modhi yekuonekwa, iyo iPhone 5 iyo inopa aruminiyamu unibody muviri uye mana-inch screen, ichipfuura kekutanga nguva yakajairwa 3,5 inches iyo yatakange taona kusvika ipapo.
Runyerekupe pamusoro peiyo nyowani iPhone 14 dhizaini ndiyo yakarongeka yezuva. Iyo tonic ndeye ...
kubudikidza Ngirozi Gonzalez inoita Mavhiki e4 .
Iyo iPhone 14 iri pamiromo yemunhu wese mumavhiki apfuura. Yayo inogona kutsva yepamberi dhizaini uye zvitsva ...
Runyerekupe nezve kuvandudzwa kwekamera kuchaunzwa neiyo iPhone 14 kwagara kuri mumwedzi ichangopfuura…
Runyerekupe rwunotanga kuwana simba uye mafashama social network mumazuva achangopfuura. Kune rimwe divi, isu tine…
Zvinoenderana nerunyerekupe rutsva rwakavakirwa pa AutoCAD renders ingadai yakaburitswa, iyo iPhone 14, mune yayo Pro Max modhi ...
MaPhones ane Touch ID pasi pechidzitiro anozononoka makore akati wandei
Iyo iPhone 14 ichaona mwenje munaGunyana unotevera. Kunyangwe kuchine mwedzi yakawanda pamberi, runyerekupe…
iPhone 14 inopinda muinjiniya yekusimbisa chikamu, periscope kamera inononoka ku iPhone 15
kubudikidza Karim Hmeidan inoita 2 mwedzi .
Tichiri muchikamu chekutanga cha2022 asi iwe unotoziva kuti nguva yerunyerekupe rwekuti chii…
Zvinoita sekunge kusvika kwemamegapixel makumi mana nemasere mune itsva iPhone 48 Pro modhi kuchawedzera kukora ...
kubudikidza Tony Cortes inoita 2 mwedzi .
Zvirongwa zvinofungidzirwa zvine zviyero zvekunze zveiyo iPhone 14 Pro zvakangoburitswa. Kana madhayagiramu aya ari echokwadi,…
Vazhinji vanoishora asi ine vateveri vayo, chizvarwa chechitatu iPhone SE chakasvika munaKurume 8 ku…
Chokwadi uri kufunga kuti iyo iPhone yaive imwe yekupedzisira kushandisa 5G tekinoroji mumidziyo yayo uye…
Musiyano uripo pakati pe iPhone 5s uye iPhone SE
Maitiro ekucheka SIM kadhi kuti ishanduke kuita micro SIM kana nano SIM